China Truck Side View Mirror PK9780 Mugadziri uye Mutengesi | West Bridge
PK9780 inokodzera ISUZU NKP NHR nhevedzano Zvigadzirwa zvatinoita zvinogonesa-kudhura uye mhando vimbiso. Izvo zvakare isu tinodawo kuti uwane kuvimba kwako zvakanyanya nekuita kuti odha yako itumirwe kwauri zvinoenderana. kambani yedu yakazvipira kuve neyakanakisa sevhisi sevhisi uye zvigadzirwa zvinowanikwa kwauri.
PK9780 inokodzera ISUZU NKP NHR nhevedzano Zvigadzirwa zvatinoita zvinogonesa-kudhura uye mhando vimbiso. Izvo zvakare isu tinodawo kuti uwane kuvimba kwako zvakanyanya nekuita kuti odha yako itumirwe kwauri zvinoenderana. Kambani yedu yakazvipira kuve neyakanakisa sevhisi sevhisi uye zvigadzirwa zviripo kwauri.Mumakore apfuura, isu zvakare tinoumba yedu bhizinesi tsika, kambani inotyairwa neakajeka poindi yekukosha uye bhizinesi chiratidzo.Tiri kutarisira kwako mutsa kutarisisa uye kureba -term bhizinesi Tinoita zvigadzirwa zvese zvakanaka uye zvinogara kune vatengi vedu. nemakore anopfuura gumi ekuvandudza, isu tave mutengesi anotungamira uye wekutengesa matori ese akazara uye zvikamu zveSINOTRUK HOWO, STEYR, STEYR MAMBO, GOLDEN PRINCE nezvimwewo, uye isu tinogona kupa yakakwana inoshumirwa uye nehunyanzvi kubvunza. kune ichi chirevo, vatengi vazhinji vanova vatengi vedu vakavimbika muzvizvarwa. Tinokukoka iwe kujoina mhuri yedu.
PK HERE PK9780
KUSHANDISA ISUZU NKP NHR akateedzana
Pashure: Kurutivi Mirror yeRori PK9583
Zvadaro: Rori Kurutivi Mirror PK9440